ကျွန်မနှင့် ရပ်ကွက်ရုံးအလွဲများ – ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကျွန်မနှင့် ရပ်ကွက်ရုံးအလွဲများ – ၃	7
ကျွန်မနှင့် ရပ်ကွက်ရုံးအလွဲများ – ၃
Posted by Foolish Girl on May 30, 2016 in My Dear Diary |7comments
အပိုင်း၃ မှာတော့ ကျွန်မ လမ်းမှူး နဲ့စတွေ့ပါပြီ
လမ်းမှူး ကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး ထောက်ခံစာ စတောင်းပါတယ်။
လမ်းမှူး – “ဘယ်အိမ်မှာငှားနေတာလဲ”
ကျွန်မ – “နံပါတ် … ။…. လွှာ ကပါ”
လမ်းမှူး – “အိမ်ရှင်ကဘယ်သူလဲ”
ကျွန်မ – “ဒေါ်…….. ပါ”
ဒါနဲ့စာချုပ်ပြလိုက်တယ်။ စာချုပ်မူရင်းကိုပြပေမယ့် သူက
“သူ့ကိုမသိဘူး ပြီးတော့ နင်အိမ်ငှားတာလည်းငါတို့သိတာမဟုတ်ဘူး ဒီတော့ အိမ်ရှင်ကိုပါခေါ်ခဲ့ပါ”တဲ့
<အမှုကကြီးလာပြီ ဒချိဒချိ မသိရင်ကိုယ်ကပဲ အိမ်ငှားစာချုပ်အတုလုပ်ပြီး ထောက်ခံစာလာတောင်းသလိုလို အတုသာလုပ်ချင်လို့ကေ တာ့ ဧည့်စာရင်း တို့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာအဲဒါတွေပဲလုပ်တော့မှာပေါ့လို့ ဦးဦး လမ်းမှူးကြီးရယ်….ပြီးတော့ ဒီလမ်းလေးထဲ လူသစ်ရောက်တာတောင် မသိဘူးလားဦးဦးရယ် လို့ စိတ်ထဲကပြောနေမိပါတယ်>
ဒီလိုနဲ့ကျွန်မလည်း အိမ်ရှင်ဆီ ထပ်သွားရပြန်ဦးမှာမို့ လမ်းမှူးအိမ်ကနေတပ်ဆုပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်………….
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မနဲ့ ရပ်ကွက်ရုံး အလွဲကထပ်မရှိသေးပေမယ့် ကျွန်မသိချင်တာလေးတွေ ရွာထဲကလူတွေကိုမေးချင်ပါတယ်…
၁) မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် မြို့တစ်မြို့မှာ အိမ်ထောင်စုဇယားရှိ နေရက်နဲ့ ဧည့်စာရင်းတိုင်နေရတာ ဘာကြောင့်လည်း ?
၂) ထားပါဧည့်စာရင်းတိုင်ရပါပြီတဲ့ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရင်လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း တွေကဘာတွေလည်း၊ လမ်းစဉ်ကဘယ်လိုလဲ?
အိမ်ငှားနေပါတယ်ဆို တစ်ပတ်တစ်ခါဧည့်စာရင်းတိုင်ရမယ် ဆိုတာက နည်းနည်းတော့တစ်မျိုးပဲ နော်။ကျွန်မနားလည်ထားတဲ့ ဧည့်စာရင်းတိုင်တယ်ဆိုတာက ဒီရပ်ကွက်မှာ ဧည့်သည်အဖြစ်တစ်ည သို့မဟုတ် တစ်ပတ် လောက်လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လို့ထင်ပါတယ်။ အိမ်ငှားတွေကိုတော့ ယာယီသန်းခေါင်စာရင်းမျိုး လုပ်ပေးသင့်တယ်ထင်တယ်။
ကျွန်မတကယ်ကို မသိလို့ပါ ရွာထဲကအစ်ကို၊ အစ်မ၊ ညီ၊ ညီမလေးများသိတဲ့သူရှိရှင်ရှင်းပြပေးကြပါ…..
Thint Aye Yeik says: တချို့ ရပ်ကွက်တွေမှာ အိမ်ငှားတွေအတွက် ယာယီသန်းခေါင်စာရင်း ဆိုတာကို
ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ တွေ့ဖူးတယ်။ အဲ့သန်းခေါင်စာရင်းဟာ အိမ် ယာ မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆောက်အဦးပိုင်ဆိုင်မှုပြ စာရွက်အထောက်အထားနဲ့ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်းဆိုတဲ့ တံဆိပ်တုံး ပါတဲ့ ယာယီသန်းခေါင်စာရင်းပါ။
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၈ တုန်းက တစ်ခါ။ ၂၀၁၄ တုန်းကလည်း စာရင်းကောက်ပြီး ထုတ်ပေးဖူးသလားလို့
Foolish Girl says: ယာယီသန်းခေါင်းစာရင်းဆိုတာ မျိုး ရလားမေးလိုက်တယ် ဒါပေမယ့်အိမ်ငှားတွေကိုထုတ်မပေးဘူးလို့ပြောတယ် တပတ်တခါ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမှာတဲ့
uncle gyi says: တပါတ်တခါတိုင်တော့
Foolish Girl says: သူကအမြဲထိတွေ့ချင်ပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံအရ မနေနိုင်ပေးဘူးလေဗျာ
ကိုယ့်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်သွား လူမှုရေးတွေလုပ်နေရတာ ကားစီးရတာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် လူက ဖလက်ပြနေပြီလေ………အိမ်ရောက်ရင်လည်း ထမင်းဝိုင်းကအဆင်သင့်မရှိတော့ ဗိုက်ဆာရင်တောင် ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှ ပြင်ဆင်စားသောက် နဲ့အချိန်ကိုမလောက်နိုင်တော့ ရပ်ကွက်ရုံးသွားရတာက နီးရင်တော်သေး မနီးရင်သေရော
ခင်ခ says: မြို့ပြရဲ့ အာဏာပါဝါပြ လုပ်စားဟောက်စားတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။
နယ်တွေမှာတော့ရှင်းတယ် ဒါမျိုးတွေမရှိသလောက်ပါဘဲ ဘယ်သူအိမ်မှာ ဧည့်သည်ရောက်တယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဧည့်သည်ဧည့်ခံဖို့ ခြံထွက်လေးတွေတောင် လာပေးကြသေးတယ်ဗျ။
အောင် မိုးသူ says: ကျွန်တော်သိတာတော့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာဆိုတာ သန်းခေါင်စာရင်းရှိမှရတာ။ အိမ်ငှားဆိုရင်တော့ ယာယီသန်းခေါင်စာရင်းပေါ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အဲဒါ ဘယ်မြို့နယ်လဲဟင်.. ကမာရွတ်မှာတော့ လွယ်တယ်.. မှတ်ပုံတင်ပါရင် ရပြီ.. စာချုပ်တောင် မလိုဘူးထင်တာပဲ..ပြောင်းလာခဲ့ပါလားဟင်င်..